Khumbuzo - www.yomelijah.com
"Izixhumanisi" ebhaliweyo ebhalwe ngesiFrentshi, zikhokelela kwisiqendu kwisiFrentshi. Kule meko, unokukhetha kwakhona kwezinye iilwimi ezintathu: isiNgesi, iSpanish, isiPutukezi.
Ukubhiyozelwa kwesikhumbuzo sokufa kukaYesu Kristu
"Kuba, eneneni, uKristu ipasika yethu ubingelelwe"
Nceda ucofe kwikhonkco ukuze ubone isishwankathelo senqaku
Umhla wesikhumbuzo sokufa kukaYesu Krestu uya kuba ngoLwesibini we-12 ka-Epreli 2022, emva kokutshona kwelanga
Ubalwa njani lo mhla?
Ungajonga inkcazo eneenkcukacha ngezantsi kwezi lwimi zingezantsi:
“Ndinazo nezinye izimvu, ezingezizo ezesi sibaya; nazo ndimele ndize nazo, ibe ziza kumamela ilizwi lam, zize zibe ngumhlambi omnye, zibe nomalusi omnye”
Ukufundwa ngenyameko kuYohane 10:1-16 kutyhila ukuba owona mxholo uphambili kukufanisa uMesiya njengomalusi wokwenyaniso wabafundi bakhe, izimvu.
KuYohane 10:1 nakuYohane 10:16 , kubhaliwe kwathiwa: “Ndiyaniqinisekisa ukuba, umntu ongangeni ngomnyango kwisibaya seegusha, osuka atsibe angene ngenye indlela, ulisela. (...) Ndinazo nezinye izimvu, ezingezizo ezesi sibaya; nazo ndimele ndize nazo, ibe ziza kumamela ilizwi lam, zize zibe ngumhlambi omnye, zibe nomalusi omnye”. Esi ‘sibaya sezimvu’ simela intsimi uYesu Kristu awashumayela kuyo, uhlanga lwakwaSirayeli, ngokomongo womthetho kaMoses: “UYesu wathuma la madoda ayi-12, waza wawayalela esithi: “Ze ningahambi ngendlela eya kummandla weentlanga, ningangeni nakwesiphi na isixeko samaSamariya; kodwa qhubekani nisiya kwizimvu ezilahlekileyo zendlu kaSirayeli” (Mateyu 10:5,6). “Wathi kubo: “Ndithunyelwe kwizimvu ezilahlekileyo zendlu kaSirayeli kuphela"” (Mateyu 15:24). Esi sibaya sezimvu “yindlu kaSirayeli” kwakhona.
KuYohane 10:1-6 kubhaliwe kwathiwa uYesu Kristu wabonakala phambi komnyango wesibaya seegusha. Oku kwenzeka ngexesha lokubhaptizwa kwakhe. “Umgcini-sango” yayinguYohane uMbhaptizi (Mateyu 3:13). Ngokubhaptiza uYesu, owaba nguKrestu, uYohane uMbhaptizi wamvulela ucango waza wangqina ukuba uYesu unguye uKrestu neMvana kaThixo: “Ngemini elandelayo wabona uYesu esiza ngakuye, wathi: “Jongani, nantsi iMvana kaThixo esusa isono sehlabathi!"" (Yohane 1:29-36).
KuYohane 10:7-15 , ngoxa ehlala kwakuloo mxholo kaMesiya, uYesu Kristu usebenzisa omnye umzekeliso ngokuzibiza ngokuba ‘ungumnyango’, ekuphela kwendawo yokungena ngendlela efanayo noYohane 14:6 : “UYesu wathi kuye: “Ndim indlela nenyaniso nobomi. Akukho mntu uya kuTata engayi ngam"". Umxholo oyintloko walo mbandela usoloko nguYesu Kristu njengoMesiya. Ukususela kwindinyana 9, kwakwesi sicatshulwa (uyawutshintsha lo mzekeliso ngelinye ixesha), UYesu ubhekisela kuye njengomalusi owalusa izimvu zakhe, ukwenza ukuba "ngaphakathi okanye ngaphandle" ukubatyisa. Imfundiso isekelwe kuye nakwindlela amele azalusa ngayo izimvu zakhe. UYesu Kristu uzichaza njengomalusi obalaseleyo oya kuncama ubomi bakhe ngenxa yabafundi bakhe nozithandayo izimvu zakhe (ngokungafaniyo nomalusi ohlawulwayo ongayi kukubeka esichengeni ubomi bakhe ngenxa yezimvu ezingezizo ezakhe). Kwakhona ugxininiso lwemfundiso kaKristu nguYe ngokwakhe njengomalusi oya kuzincama ngenxa yezimvu zakhe (Mateyu 20:28).
Yohane 10:16-18 : “Ndinazo nezinye izimvu, ezingezizo ezesi sibaya; nazo ndimele ndize nazo, ibe ziza kumamela ilizwi lam, zize zibe ngumhlambi omnye, zibe nomalusi omnye. UTata uyandithanda, kuba ndincama ubomi bam, ukuze ndiphinde ndibufumane kwakhona. Akukho mntu ubuthathayo kum, kodwa ndibunikezela ngokwam. Ndinegunya lokubunikezela, ndikwanalo negunya lokuphinda ndibufumane. Ibe ndilifumene kuTata".
Ngokufunda ezi ndinyana, eqwalasela umongo weendinyana ezandulelayo, uYesu Kristu uvakalisa ingcamango entsha ngelo xesha, yokuba wayeya kunikela ngobomi bakhe kungekuphela nje ngenxa yabafundi bakhe abangamaYuda, kodwa kwanangenxa yabo bangengomaYuda. Ubungqina bobokuba, umyalelo wokugqibela awunikela kubafundi bakhe, ngokuphathelele ukushumayela, ngulo: “Kodwa niza kuba namandla xa nifumana umoya oyingcwele, ibe niza kuba ngamangqina am eYerusalem, kulo lonke elakwaYuda naseSamariya, de niyokufika nakwezona ndawo zikude emhlabeni” (IZenzo 1:8). Kukubhaptizo lukaKorneli kanye apho amazwi kaKristu akuYohane 10:16 aya kuqalisa ukuzaliseka (Jonga ingxelo yembali yeZenzo isahluko 10).
Ngaloo ndlela, “ezinye izimvu” kuYohane 10:16 zibhekisela kumaKristu angengomaYuda enyameni. KuYohane 10:16-18 , ichaza umanyano ekuthobeleni kwezimvu uMalusi uYesu Kristu. Kwakhona wathetha ngabo bonke abafundi bakhe bomhla wakhe ‘njengomhlambi omncinane’: “Sanukoyika mhlambi mncinci, kuba uTata wenu uza kuninika uBukumkani” (Luka 12:32). NgePentekoste ka-33, abafundi bakaKristu babemalunga ne-120 kuphela (IZenzo 1:15). Ekuqhubekeni kwengxelo yeZenzo, sinokufunda ukuba inani labo liya kunyukela kumawaka ambalwa (IZenzo 2:41 (3000) imiphefumlo; IZenzo 4:4 (5000)). Nokuba kusenokuba njalo, amaKristu amatsha, enoba ngexesha likaKristu, njengakwixesha labapostile, afanekisela ‘umhlambi omncinane’ ngokubhekisele kuluntu ngokubanzi lohlanga lwakwaSirayeli kwanakwezinye iintlanga zonke ngelo xesha ixesha.
Masimanyane njengoko uYesu Kristu wabuza uYise
"Andiceleli aba bodwa, kodwa ndicelela nabo baza kuzikholelwa izinto abazifundisayo ngam, ukuze bonke babe banye, njengokuba nawe Tata umanyene nam, nam ndimanyene nawe, baze nabo bamanyane nathi, ukuze ihlabathi likholwe ukuba ndithunywe nguwe" (Yohane 17:20,21).
- IPhasika ngumzekelo weemfuno zikaThixo zokubhiyozela isikhumbuzo sokufa kukaKristu: "kuba ezo zinto zisisithunzi sezinto ezizayo, inkqu yazo ke nguKristu" (Kolose 2:17). "Kuba ekubeni uMthetho unesithunzi sezinto ezilungileyo eziza kuza, kodwa ungenawo owona mongo wezinto" (Hebhere 10:1).
- Abalukileyo kuphela ababengayigubha iPasika: "Xa athe owasemzini wahlala nani njengomphambukeli, kwaye eza kuyibhiyozela ipasika kuYehova, mayaluswe yonke into eyindoda kuye. Angandula ke aqale ukusondela ukuze ayibhiyozele; yaye woba njengenzalelwane yelizwe. Kodwa akukho mntu ungalukanga umele adle kuyo" (Eksodus 12:48).
- AAmaKristu azikho phantsi koxanduva lokusoka ngokomzimba. Nolwaluko lwakhe ungowomoya: "Yalusani ke ijwabi leentliziyo zenu ningabi sazenza zibe lukhuni iintamo zenu" (Duteronomi 10:16; IZenzo 15:19,20,28,29 "umthetho wabapostile"; Roma 10: 4 "uKristu ekupheleni koMthetho "(unikezwe kuMoses)).
- Ukusoka kokomoya kuthetha ukuthobela uThixo kunye nendodana yakhe uYesu Kristu: "Ulwaluko, enyanisweni, luyingenelo kuphela ukuba uqhelisela umthetho; kodwa ukuba uyanxaxha emthethweni, ulwaluko lwakho lukukungaluki. Ukuba, ke ngoko, umntu ongalukanga uyayigcina imilinganiselo yobulungisa yoMthetho, ukungaluki kwakhe kuya kubalwa njengolwaluko, akunjalo? Yaye umntu ongalukanga abe enjalo ngemvelo uya kuthi, ngokuwuphumeza uMthetho, akugwebe wena othe nakuba unayo ingqokelela yemithetho ebhaliweyo kwanolwaluko wanxaxha kuwo umthetho. Kuba umYuda akanguye ngokwangaphandle, nolwaluko asilulo olwangaphandle enyameni. Kodwa umYuda unguye ngaphakathi, nolwaluko lwakhe lolo lwentliziyo+ ngawo umoya, kungekhona ngengqokelela yemithetho ebhaliweyo. Indumiso yalowo ivela, kungekhona ebantwini, kodwa kuThixo" (KwabaseRoma 2:25-29) (Les enseignements bibliques).
- Ukungaluki kokomoya kubonisa ukungathobeli uThixo kunye nendodana yakhe uYesu Kristu: "Bantundini baneenkani nabangalukileyo ngeentliziyo neendlebe, nisoloko niwuxhathisa umoya oyingcwele; kanye njengoko ookhokho benu benjenjalo, nani nenjenjalo. Nguwuphi na kubaprofeti abangazange bamtshutshise ookhokho benu? Ewe, bababulala abo benza isaziso kwangaphambili ngokuza kwaLowo ulilungisa, eniye nangabangcatshi nababulali bakhe ngoku, nina enamkela uMthetho njengoko wawudluliselwa ziingelosi kodwa anawugcina" (IZenzo 7: 51-53) (Les enseignements bibliques (Ce que la Bible interdit)).
- Ukusoka kokomoya kwentliziyo kuyadingeka ukuba uthathe inxaxheba ukubhiyozelwa kwesikhumbuzo sokufa kukaYesu Kristu (nawuphi na ithemba lobuKristu (ezulwini okanye emhlabeni)): "Kuqala umntu makazicikide, aze ke asitye isonka, ayisele nendebe" (1 Korinte 11:28).
- UmKristu kufuneka ahlole isazela ngaphambi kokuthatha inxaxheba ukubhiyozelwa kwesikhumbuzo sokufa kukaYesu Kristu. Ukuba ucinga ukuba nesazela esicocekileyo phambi koThixo, yena ulwaluko ngokomoya, ngoko ke inxaxheba kwisikhumbuzo sokufa kukaKristu (nayiphi na ithemba lamaKristu (ezulwini okanye emhlabeni)) (La résurrection céleste; La résurrection terrestre; La Grande Foule; La libération).
- Umyalelo ocacileyo kaKristu, ukuba atye ngokufuzisela "inyama" yakhe kunye "negazi" lakhe, isimemo kubo bonke abathembekileyo abangamaKristu ukuba badle "isonka esingenagwele", emele "inyama" yakhe nokusela indebe, emela "igazi": "Ndim isonka sobomi. Ookhokho benu batya imana+ entlango ukanti bafa. Siso esi isonka esihla sivela ezulwini, ukuze nabani na atye kuso aze angafi. Ndim isonka esiphilayo esehla sivela ezulwini; ukuba nabani na utya kwesi sonka uya kuphila ngonaphakade; yaye, enyanisweni, isonka endiya kusinikela yinyama yam ngenxa yobomi behlabathi.” Ngoko ke amaYuda asukuzana, esithi: “Angathini na lo mntu ukusinika inyama yakhe ukuba siyidle?” Ngako oko uYesu wathi kuwo: “Inene, inene, ndithi kuni, Ngaphandle kokuba nitya inyama yoNyana womntu nize nisele igazi lakhe, aninabo ubomi kuni. Lowo utya inyama yam aze asele igazi lam unobomi obungunaphakade, yaye ndiya kumvusa+ ngomhla wokugqibela; kuba inyama yam ikukutya kokwenyaniso, negazi lam lisisiselo sokwenyaniso. Lowo utya inyama yam aze asele igazi lam uhleli emanyene nam, nam ndimanyene naye. Kanye njengoko uBawo ophilayo endithumile yaye nam ndiphila ngenxa kaBawo, nalowo undityayo, uya kuphila ngenxa yam. Siso esi isonka esehla sivela ezulwini. Akukho njengaxa ookhokho benu batyayo ukanti bafa. Lowo usityayo esi sonka uya kuphila ngonaphakade" (Yohane 6:48-58) (Jésus-Christ le seul chemin).
- Ngoko ke, onke amaKristu athembekileyo (nawuphi na ithemba lobuKristu (ezulwini okanye emhlabeni)), kufuneka uthathe isonka newayini ye kwisikhumbuzo sokufa kukaKristu, umyalelo ocacileyo kaKristu: "Ngako oko uYesu wathi kuwo: “Inene, inene, ndithi kuni, Ngaphandle kokuba nitya inyama yoNyana womntu nize nisele igazi lakhe, aninabo ubomi kuni. (...) Kanye njengoko uBawo ophilayo endithumile yaye nam ndiphila ngenxa kaBawo, nalowo undityayo, uya kuphila ngenxa yam" (Yohane 6:53,57).
- Ukukhunjulwa kokufa kukaKristu kukubhiyozelwa kuphela phakathi kwabalandeli bakaKristu abathembekileyo amaKristu: "Ngenxa yoko, bazalwana bam, xa nithe nabuthelana ndawonye ukuba nisitye, lindanani" (1 kwabaseKorinte 11:33) (Adoration à Jéhovah en congrégation).
- Ukuba unqwenela ukuthatha inxaxheba Ukubhiyozelwa kwesikhumbuzo sokufa kukaYesu Kristu, kwaye aninguye amaKristu, kufuneka ubhaptizwe, unqwenela ngokunyanisekileyo ukuthobela imiyalelo kaKristu: "Hambani ke ngoko niye kubenza abafundi abantu beentlanga zonke, nibabhaptiza egameni loYise neloNyana nelomoya oyingcwele, nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniyalele zona. Yaye, khangelani! ndinani yonke imihla de kube sekuphelisweni kwenkqubo yezinto" (Mateyu 28:19,20) (Baptême).
Ukubhiyozela imemori yokufa kukaYesu Kristu?
"Qhubekani nikwenza oku ningikhumbule"
Emva komthendeleko wePasika, uYesu Kristu wabeka umzekelo wokubhiyozelwa kwexesha elizayo lokukhumbula ukufa kwakhe (Luka 22: 12-18). Zikule mibhalo yeBhayibhile, iincwadi zeVangeli:
Mateyu 26: 17-35.
Marko 14: 12-31.
Yohane isahluko 13 ukuya ku-17.
UYesu wanikela isifundo ngokuthobeka, ukuhlamba iinyawo zabafundi bakhe (Yohane 13: 4-20). Nangona kunjalo, esi siganeko akufanele sithathwe njengesithethe sokuziqhuba ngaphambi kokukhunjulwa (thelekisa uYohane 13:10 kunye noMateyu 15: 1-11). Nangona kunjalo, ibali liyasitshela ukuba emva koko, uYesu Kristu "wambatha izambatho zakhe zangaphandle". Ngoko ke simele sigqoke kakuhle (Yohane 13: 10a, 12 ukuthelekisa noMateyu 22: 11-13). Ngendlela, kwindawo yokubulawa kukaYesu Kristu, amajoni athabatha iingubo ayezigqoke ngalobo busuku. I-akhawunti kaYohane 19: 23,24 isitshela ukuba uYesu Kristu wayenxibe "Kodwa isambatho sangaphantsi sasingenamthungo, silukiwe ukususela phezulu kubo bonke ubude baso". Amajoni awazange afune ukulidiliza. UYesu Kristu wayegqoke kakuhle, ezihambelana nokubaluleka kwesi siganeko (Hebhere 5:14).
Ukuba le mkhosi iya kubhiyozelwa kuphela phakathi kwamaKristu athembekileyo (Mateyu 26: 20-25, Marko 14: 17-21, 1 ​​Korinte 11: 28,33)).
Umthendeleko wokukhunjulwa uchazwa ngokulula kakhulu: "Njengoko babeqhubeka besidla, uYesu wathabatha isonka waza, emva kokucela intsikelelo, wasiqhekeza, wanika abafundi, wathi: “Thabathani, nidle. Oku kuthetha umzimba wam.” Wathabatha nendebe waza, akuba ebulele, wayinika bona, esithi: “Selani kuyo, nonke; kuba oku kuthetha ‘igazi lam lomnqophiso,’ eliza kuphalala ngenxa yabaninzi ukuze kuxolelwe izono. Kodwa ndithi kuni, andisayi kuyisela le mveliso yomdiliya, ukususela ngoku, kude kube yiloo mini ndiyisela nani intsha ebukumkanini bukaBawo.” Ekugqibeleni, emva kokuvuma iindumiso, baphuma baya eNtabeni yemiNquma" (Mateyu 26: 26-30). UYesu Kristu wachaza isizathu salo mkhosi, intsingiselo yombingelelo wakhe, sisiphi isonka esingenagwele esimele, umqondiso wesimo sakhe esingenasono, indebe yewayini, uphawu lwegazi lakhe. Wacela abafundi bakhe ukuba bakhumbule ukufa kwakhe rhoqo ngomnyaka 14 Nisan (inyanga ikhalenda yamaYuda) (Luka 22:19).
IVangeli likaYohane lisichazela ngemfundiso kaKristu emva kwalo mkhosi, mhlawumbi kuYohane 13:31 kuYohane 16:30. UYesu Kristu wathandaza kuYise, ngokukaJohane isahluko 17. uMathewu 26:30, usixelela: "Ekugqibeleni, emva kokuvuma iindumiso, baphuma baya eNtabeni yemiNquma". Kungenzeka ukuba ingoma yokudumisa emva komthandazo kaYesu Kristu.
Simele silandele umzekelo kaKristu. Umcimbi kufuneka uhlelwe ngumntu omnye, umdala, umfundisi, umbingeleli webandla lobuKristu. Ukuba umthendeleko ugcinwa kwintsapho, yintloko yentsapho yamaKristu ekufuneka ibhiyozele. Ngaphandle komntu, Umfazi ongumKristu oya kuququzelela umthendeleko kufuneka akhethwe phakathi kwabasetyhini abadala abathembekileyo (Tito 2: 3). Kule meko, loo mfazi ikhava intloko (1 kwabaseKorinte 11: 2-6).
Nabani na olungiselela umthendeleko uya kuthatha isigqibo malunga nokufundisa kule meko esekelwe kwingxelo iincwadi zeVangeli, mhlawumbi ngokubafunda ngokubeka izimvo kubo. Umthandazo wokugqibela obhekiswe kuYehova uThixo uya kuthiwa. Ukudumisa kunokuhlabelelwa ekunqulekeni kuYehova uThixo nokuhlonela uNyana wakhe uYesu Kristu.
Ngokuphathelele isonka, uhlobo okuziinkozo engakhankanywanga, Noko ke, oko kufuneka kwenziwe ngaphandle nagwele (Indlela yokulungisa izonka ezingenagwele (ividiyo)). Ngewayini, kwamanye amazwe kunokuba nzima ukufumana enye. Kule meko ekhethekileyo, ngaba iinkokeli eziya kuthatha isigqibo malunga nendlela yokuyithatha indawo ngendlela efanelekileyo kakhulu ngokusekelwe kwiBhayibhile (Yohane 19:34). UYesu Kristu wabonisa ukuba kwiimeko ezithile ezizodwa, izigqibo ezizodwa nokuba inceba kaThixo iya kusetyenziswa kwesi sihlandlo (Mateyu 12: 1-8).
Akukho nkcazelo yeBhayi- bhile ngexesha elichanekileyo lomcimbi. Ngoko ke, nguye oya kuququzelela esi Umthendeleko esiza kubonisa isigwebo esifanelekileyo. Ingongoma kuphela ebalulekileyo yeBhayibhile malunga nexesha lo mkhosi oku kulandelayo: kwisikhumbuzo sokufa kukaYesu Kristu kufuneka ezibhiyozelwa "phakathi ezimbini ebusuku": Emva kwelanga 13/14 "uNisan", naphambi ilanga livuke. UYohane 13: 30 usixelela ukuba xa uYudas Iskariyoti washiya, ngaphambi Umthendeleko, "Yaye kwakusebusuku" (Eksodus 12: 6).
UYehova uThixo wayemisele lo myalelo wepasika: "Nombingelelo womthendeleko wepasika uze ungahlali kude kuse" (Eksodus 34:25). Kutheni? Ukufa kwegusha lePasika kwakuza kwenzeka "phakathi ezimbini ebusuku". Kokufa kukaKristu, iMvana kaThixo, yabhengezwa "isigwebo" kwakhona "phakathi ezimbini ebusuku", phambi kusasa, "naphambi ilanga livuke": Ngoko umbingeleli omkhulu wakrazula izambatho zakhe zangaphezulu, esithi: “Unyelisile! Sisawafunelani na amangqina?+ Yabonani! Ngoku nikuvile ukunyelisa. Luthini uluvo lwenu?” Baphendula bathi: “Ufanelwe kukufa.” (...) Yaye ngoko nangoko umqhagi wakhonya. Kwaye uPetros wakhumbula ilizwi elalithethwe nguYesu, elileli: “Ngaphambi kokuba umqhagi ukhonye, uya kundikhanyela kathathu.” Yaye waphuma phandle waza walila ngokukrakra" (Mat 26: 65-75; Pisalema 94:. 20 "wenza umonakalo ngomyalelo"; Yohane 1: 29-36, Kolose 2:17, Hebhere 10: 1). UThixo usikelela amaKristu athembekileyo ehlabathini lonke ngoNyana Wakhe uYesu Kristu, amen.